Maitiro ekuwedzera nhamba yevhiki muKarenda application | Ndinobva mac
Kune vanhu vese vane rakasimba kwazvo, karenda rinowanzo, kazhinji kacho, hupenyu hwedu, chero bedzi isu tichichengeta odha kana tichipinda muzviitiko zvese uye ita shuwa kuti vanorira pazuva rakatarwa nenguva.
Ndiri kubva kuMac isu takaburitsa nguva dzinoverengeka zvinyorwa zvatakakuratidza maitiro atingaite bvisa karenda, sei ronga makarenda neruvara kana kunyangwe kudzivirira iko kunyorera kubva kutizivisa nezororo kana mazuva ekuberekwa eshamwari dzedu. Nhasi iko kutendeuka kweimwe nyowani dzidziso, dzidziso kwatinokuratidza maitiro ekuwedzera iyo svondo nhamba kune iyo khalendari.
Kune avo vese vanhu vanowanzo shanda kwemavhiki kwete kwemwedzi kana mazuva, mukana wekukwanisa kukurumidza kuziva huwandu hwevhiki yatiri inogona kubatsira zvikuru, nekuti hazvidiwe kutendeukira kune dzakarenda makarenda kana enda unoverenga manhamba evhiki nguva dzese patinotanga gore idzva. Neraki, iyo Calendar application inotibvumidza isu kuti tiwedzere iyi mhando yeruzivo, kuti iratidzwe pese patinoshandisa chishandiso.
Wedzera nhamba yevhiki kune MacOS Calendar app
Kana tangovhura iyo Calendar application, tinoenda kune zvido zvekushandisa kuburikidza neKarenda menyu iri kumusoro kuruboshwe.
Wobva wadzvanya pane Yepamberi tebhu
Mune inotevera nhanho isu tinongofanirwa kutarisa Ratidza nhamba yevhiki bhokisi.
Nekushandisa iri bhokisi, iyo yemwedzi khalendari iri kurudyi kwechishandiso, ichatiratidza nhamba yevhiki. Iyi nhamba inozoratidzwawo pazuva revhiki matiri iko kunyorera kuvhurwa, chingori mushure mezuva revhiki ratiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuwedzera nhamba yevhiki muKarenda application